Ny fahefana, hiasa ho an'iza ? | SEFAFI
Raha feno ireo fepetra ireo, na fara fahakeliny raha samy miezaka daholo ny andaniny sy ankilany hanao izay hahafeno azy, dia ho roso eo amin’ny lalan’ny « demokrasia » ny firenena, ny « tsara tantana » sy ny « Fanjakana tan-dalàna » – fiteny tsara rafitra zary very hasina noho izy tsy an-kijanona no averim-berin’ireo mpitari-bato vilam-bava indrindra indrindra. Tsy vita tsy misy fiomanana ny fizakam-pahefana. Ny traikefa teo am-panaovana azy no ahazoana azy, ary tsy maintsy hajaina ny etìka sy ny soridalana ary ny fitsipika izay iainana. Ny fampiharana
Ary farany, ny fanaovana politika dia ahitana fanitsakitsahan-dalàna tsy an-kijanona, ny lalàna anefa dia tokony « hitovy ho an’ny rehetra ». Tsy misy ambonin’ny lalàna, hono – afa-tsy ny mpanao politika. Porofon’izany, azo antoka fa tsy maty manota ny manana fahefana amin’ny ambaratongany isan-tokony, omban’ny olona tsy an-kanavaka manodidina azy. Tsy mbola nisy hatrizay mpitondra na iray aza ka voaheloka noho izy nanodinkodina volam-bahoaka, na nanararao-pahefana, na nanondrana an-tsokosoko hazo sarobidy, nangorona tsy ara-dalàna velaran-tany na nanao fifanarahana fitrandrahana harena an-kibon-tany an-tsokosoko. Mbola loza lavitra noho izany, mitatra hatrany amin’ny fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana, ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana hatrany hatrany fa ara-dalàna, ny tsy fisian’ny sazy, ka voaaro tsara amin’ny fanoherana mety hitranga ny mpitondra. Toy izany izao ny momba ny andininy 10 sy 11 (fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy zo hahazo vaovao), 41 (fanambaram-pananana), 50 (fampiatoana ny prezidàn’ny Repoblika), 54 (fanendrena ny praiminisitra) na 72 (ny solombavambahoaka tsy maintsy manaraka ny baikon’ny antoko nandaniana azy mandritra ny fe-potona iasany). Aharihary sy takiana ny ho tsy maty manota, manafintohina ny fijoroana ho vavolombelona amin’izany nataon’ny Tondro zotra tamin’ny 2011, izany no anisan’ny antony lehibe nandavaka ny hantsana mampisaraka ny mpanao politika amin’ny fiheveran’ny vahoaka. Inona àry no hatao ? Tsy miafina na amin’iza na iza fa tena mampatahotra ny toe-draharaha ankehitriny – afa-tsy amin’ny mpanao politika izay mivelona any ivelan’ny zava-misy ihany angamba. Mitombo isa ny lakolosy fampitandremana, avy amin’ny fiarahamonim-pirenena manerana ny vazantany rehetra. Na izany aza, moa ve mbola tokony hiverina hanao Tetezamita vaovao indray, hiantso fiaraha-midini-pirenena tsy mahasolo tena akory ny mponina sady miharihary fa fitaovam-piasana fotsiny toy ny teo aloha ihany, ary hanao tefy maika Lalàmpanorenana vaovao ? Ireny tolo-kevitra avy amin’ny mpanao politika efa nailika na avy amin’ny matim-boninahitra tsy sahy miseho masoandro ireny dia tsy hahavaha na inona na inona. Ny ho ratsy indrindra dia mainka koa ireny hamono hasina tanteraka ny fitondrana ary ny ho tsara indrindra dia ireny no hamerina ireo efa teo ihany... Tsy ny resaka intsony izao no vahaolana fa ny asa. Asa fa tsy kabary (acta non verba), tian’ny prezidà Tsiranana ery ny namerimberina izany. Tonga izao io fotoana io, saingy tsy maintsy lavina ny fomba fiasa natolotry ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Mba hamongorana hatramin’ny fakany ny kolikoly mantsy (satria izy no andrim-panjakana fahatelo faran’izay mpanao kolikoly, araka ny voalazan’ny BIANCO vao tsy ela akory izay) dia eritreretiny ny hampiditra any anaty fandaharam-pianarana ny lesona momba ny fanoherana ny kolikoly. Izany hoe mpampianatra mpanao kolikoly izany no hampianatra an’io taranja io, ary ny mpiasa ambony any amin’ny minisitera no hiantoka ny fampiharana azy !
Antananarivo, androany faha-20 Augositra 2016